गो’प्य ‘पा’र्ट गोरो बनाउनेको बजारमा भि’ड ! – Sanchar Patrika
August 14, 2020 339
एसियाली मुलुकमा छालालाई गोरो बनाउने कोशिस नयाँ भने होइन, किनभने काला रङ्गको विषयमा यहाँ वि’चित्रको सोच छ । हालै जब यो विषयसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई अनलाइनमा हा’लियो तब यो भा’इरल हुन केहीबेर पनि लागेन । थाइल्याण्डको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो प्रक्रियाको विषयमा चे’तावनी पनि जारी गरेको छ।
बीबीसी थाई सेवाले यो प्रक्रियाबाट गुज्रेका एक जनासँग गरेको कुराकानीमा उनले भने–म आफ्नो ”’स्वी”मि”ङ ब्री’फ्स’मा बढी सहज महशुस गर्न चाहन्थेँ । ३० वर्षका उक्त व्यक्ति दुई महिनाअघि पहिलोपटक यस्तो सत्रबाट गु”ज्रेका थिए र उनले ‘शे’ड”मा परिवर्तन देखेका थिए ।
यो उपचार उपलव्ध गराउने क्लिनिकको तर्फबाट जुन फेसबुक पोस्ट गरिएको छ, त्यसलाई मानिसहरुले दुई दिनमा १९ हजारपटक शेयर गरे । यो उपचारमा छालामा मे’ला’नि’न कम गरिन्छ । यो पोस्टमा उपचार कक्षको तस्वीर र पहिलो र पछिको इ’ल’स्ट्रेश’न पनि छ । यो विषयमा मानिसहरु फरक फरक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
केही भनिरहेका छन् कि यो आवश्यक छ । यहि केहीले रोजक सुझाव पनि दिइरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार ‘यसलाई ट’र्च’का रुपमा प्रयोग सकिन्छ, चम्कन देऊ । एक जना महिलाले आ’श्चर्य प्रकट गर्दै लेखेकी छन् कि उनी यसको रङ्गलाई लिएर त्यति धेरै ग’म्भीर कहिले पनि भइनन् बरु सा’इज र ‘मू’भको विषयमा चि’न्ता व्यक्त गरिन् ।
यो सेवा दिने ले’ल’क्स अस्पतालका मार्केटिङ म्यानेजर पोपोल तन्साकुलले बीबीसीसँग भने कि उनले चार महिना पहिला महिलाहरुको ”गो’प्य ‘पा”र्ट गो’रो बनाउने सेवा सुरु गरेका हुन् । उनले भने–मानिसहरु त्यति बेलै बाट यसका बारेमा सोध्न थालेका थिए ।त्यसैले हामीले एक महिनापछि यो सेवा पनि थाल्यौ ।’ पाँच सत्रको यो पूरा प्रक्रियाको खर्च ६५० डलर छ ।
Prevमृगौला पी’डित छोरीलाई जन्म दिने बाबुद्वारा ज्यान मा’र्ने ध’म्की
Nextविश्वभर २ करोड १० लाख बढीमा कोरोना संक्रमण,७ लाख ५२ हजार बढीको मृ-त्यु, १ करोड ३९ लाखले कोरोनालाई जितेर घर फर्किए
कोरोनाबाट बच्न घरभित्र पनि अपनाउनुहोस यी ८ सावधानी
भारतबाट स्वदेश फर्केर १४ दिन क्वारेन्टाईन बसेर घर फर्केकी गोदावरी १० की महिलाको ज्यान गयो ! :